Wed, Jul 8, 2020 at 4:23am
सलमान खान र कट्रिना कैफको हिट जोडी फेरी 'देश' मा देखिंदै, प्रियंका चोपडा अटाईनन् !
बुधबार, चैत्र २१, २०७४ साल
काठमाडौँ, २१ चैत बलिउडमा सलमान खान र कट्रिना कैफको जोडी निकै हिट मानिन्छ । हालै उनीहरुको फिल्म 'टाइगर जिन्दा है'ले बक्स अफिसमा तहल्का मच्चाएको थियो । दर्शकहरुले यो जोडीलाई फेरि एकपटक सँगै हेर्न पाउने भएका छन् । सलमानको आगामी फिल्म देशमा कटि्रना कैफले खेल्ने भएकी छिन् । यसअघि सो फिल्ममा पि्रयंका चोपडा खेल्ने चर्चा थियो । पछिल्लो समय हलिउडमा फोकस गरेकी प्रियंका त्यहाँ..
‘आशि‍की ३’ मा वरुण धवन र आलिया भट्को जोडी ! सिद्धार्थ मल्होत्रा अटाएनन् !
मंगलवार, चैत्र २०, २०७४ साल
काठमाडौं, २० चैत । बलिउडको चर्चित चलचित्र ‘आशि‍की’ को तेस्रो पार्ट बन्ने भएको छ । निर्माणपक्ष ‘आशिकी ३’ बनाउने तयारीमा जुटेका बताईंन्छ । यस फिल्ममा यसअघि आलिया भट्ट र सिद्धार्थ मल्होत्रालाई साइन गरिएको खबर आएको थियो । तर, नयाँ रिपोर्ट अनुसार फिल्ममा आलिया भट्टसँग सिद्धार्थ नभई वरुण धवनलाई अनुबन्ध गरिएको छ । आलिया र वरुण को फ्यान फलोइङलाई मध्यनजर गर्दै निर्माणपक्षले यो..
राजेश हमाल प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण टोलीमा ! थाहा पाउनुहोस किन जान लागे राजेश हमाल ?
सोमबार, चैत्र १९, २०७४ साल
काठमाडौं, १९ चैत । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणमा कलिउडले पनि स्थान पाएको छ । ओलीले यही चैत २३ गतेदेखि तीन दिने भारतको भ्रमण गर्दैछन् । ५५ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै भारत भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री ओलीले बलिउडका कलाकारसँग पनि भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीकाअनुसार चैत २४ गते साँझ बलिउडका कलाकारसँग भेट हुनेछ । बलिउड कलाकारसँग भेटघाट गर्न लागेका..
अनुष्का शर्माले तीन फरक–फरक विधाका चलचित्र बनाउँदै, बिराट कोहली हिरो ?
आईतवार, चैत्र १८, २०७४ साल
काठमाडौँ, १८ चैत बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री अनुष्का शर्माले प्रोडक्सन क्षेत्रमा हात हालेर उनी तीन फिल्म बनाउने तयारीमा जुटेकी छन् । यसअघि उनले अहिलेसम्म तीन वटा फिल्म निर्माण गरिसकेकी छिन् । ताजा जानकारीअनुसार अनुष्काले आफ्नै ब्यानरमा निर्माण हुने तीन फिल्मको नाम घोषणा गर्दै छिन् । उनका अनुसार यी तीनै फिल्म फरक–फरक विधाका हुनेछन् । उनले अभिनय गरेका तीन फिल्म पनि यसै वर्ष आउँदै छन्..
कपिल शर्मा फेरी विवादमा, रानी मुखर्जीलाई बोलाएर कार्यक्रम नै रद्द गरे !
शुक्रबार, चैत्र १६, २०७४ साल
काठमाडौं, १६ चैत । चर्चित भारतीय कमेडियन कपिल शर्मा फेरी पनि विवादमा परेका छन् । कार्यक्रममा पाहुना बोलाएर घण्टौँ कुराउनेदेखि स्वमय् आफैं कार्यक्रममा अनुपस्थित रहेको कपिल शर्मामाथि आरोप लागेको लाग्ने गरेको छ । कपिलको गैरजिम्मेवार व्यवहारका कारण उनले सञ्चालन गरेको ‘फेमिली टाइम विथ कपिल शर्मा’को प्रोडक्सन हाउसलाई करिब ३० लाख घाटा पुगेको दाबी गरिएको छ । चलचित्र ‘हिच्कि’ को प्रोमोसनका लागि उक्त शोमा..
कपिल शर्माको लोकप्रियता खुइलियो, नयाँ शोको पनि देखिएन दम !
बिहिवार, चैत्र १५, २०७४ साल
काठमाण्डु, १५ चैत भारतीय हाँस्य कलाकार कपिल शर्माको हिट भईसकेपछिको जिवनलाई अहंकारको उदाहरणले ठ्याक्कै परिभाषित गर्छ । यसले मानिषलाई उचाईबाट तल झार्न समय लाग्दैन यही भनाई एक ताकाका चर्चाको शिखरमा पुग्न सफल सिद्ध भएको छ । द ‘कपिल शर्मा शो’ जतिबेला लोकप्रियताको शिखरमा थियो त्यतीबेला बलिउडका चल्तीका नायक नायीकाहरु पनि कपिलको शोमा देखीन लालायीत हुन्थे । बिस्तारै लोकप्रियतासँगै ‘कपिलमा मात र दम्भ..
कसले दियो बलिउड अभिनेत्री रानी मुखर्जीलाई सपरिवारको ज्यान मार्ने धम्की ? थाहा पाउनुहोस्
बुधबार, चैत्र १४, २०७४ साल
काठमाडौं, १४ चैत । बलिउडमा ९० को दशकमा आएकी बलिउड अभिनेत्री रानी मुखर्जी सन् २००५ मा बलिउडकी सर्वाधिक शक्तिशालीको सूचिमा आटाउने एक मात्र महिला बनेकी थिइन् । तर समयले कति छोटो कोल्टे फेर्ने रैछ ! उनै बलिउड अभिनेत्री रानी मुखर्जीको परिवारलाई अहिले ज्यान मार्ने धम्की आएको छ । अज्ञात व्यक्तिबाट उनको परिवारको सम्पूर्ण सदस्यलाई मार्ने धम्की आएको भारतीय मिडियाले जनाएको छ । फिल्म ’मोहब्बते’बाट..
बहुप्रतिष्ठित बलिउड चलचित्र ‘डन–३’ स्क्रिप्ट तयार, प्रियंका चौपडा भने अटाईनन्
मंगलवार, चैत्र १३, २०७४ साल
काठमाडौं, १३ चैत । ‘डन–३’ शाहरुख खानको बहुप्रतिष्ठित चलचित्र मध्ये एक रहेको छ । निर्माण गरिने भनिएको बलिउड फिल्म ‘डन–३’ स्क्रिप्ट तयार भइसकेको जनाइएको छ । फरहान अख्तरले स्क्रिप्ट तयार गरिसकेको ‘डन–३’ मा शाहरुख खान देखिने भएका छन् भने प्रियंका चौपडालाई आउट गरिएको भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेका छन् । निर्देशक फरहानले समेत अभिनयमा गर्ने भनिएको डन ३ मा शाहरुख डनको भूमिकामा रहने..
अनुष्का शर्मा सबैभन्दा लोकप्रिय स्टार भएको तथ्य सार्वजनिक, सन्नी लियोनीलाई पनि पछि परिन्
सोमबार, चैत्र १२, २०७४ साल
काठमाडौँ, १२ चैत बलिउड अधिनेत्री अनुष्का शर्मा सामाजिक सञ्जालमा सबैभन्दा लोकप्रिय स्टार भएको एक तथ्यले जनाएको छ । उनि बढी समाचारमा छाइरहने प्रभावशाली स्टार भएको एक सर्वोक्षणले देखाएको हो । सबै भाषामा सबै मिडियामा आउने खबरलाई आधार मानेर संसारको अग्रणी टेक्नोलोजी कम्पनी ‘स्कोर ट्रेन्डस्’ ले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा उनी अगाडि देखिएकी हुन् । आँकडाको आधार फेसबुक, ट्वीटर, १४ भाषामा भएको प्रिन्ट प्रकाशन, सामाजिक..
बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री भईन् बलात्कृत ! ३८ वर्षका व्यवसायीमाथि लगाईन् अभियोग
आईतवार, चैत्र ११, २०७४ साल
एजेन्सी, ११ चैत हामीले बलात्कारको घटना नेपालमा धेरै नै सुन्दै आएका छौँ । साधारण तर यसपटक नेपालमा होइन तर भारतमा एक अभिनेत्री बलात्कारको शिकार भएकी छिन् । बलिउड अभिनेत्री जीना अमानले एक व्यवसायीमाथि बलात्कारको अभियोग लगाउँदै प्रहरीमा मुद्दा दर्ता गराएकी छिन् । ६८ वर्षकी यी अभिनेत्रीले ३८ वर्षका व्यवसायी अमन खन्नामाथि बलात्कारको अभियोग लगाएकी हुन् । जीनाले अमनविरुद्ध हिजो साँझ बलात्कारको मुद्दा..
आखिर किन अक्षय कुमार आफैँले श्रीमतीलाई ‘अटोरिक्सा’मा राखेर घुमाउनु पर्यो ? थाहा पाउनुहोस् ...
काठमाडौं, ११ चैत । काम गरे मध्ये व्यस्त मानिने मध्ये एकमा कलाकार पनि पर्दछन् । त्यसमा पनि बलिउड कलाकार झनै व्यस्त देखिन्छन् । उनीहरुको व्यस्तताले आफ्नो परिवार र इच्छाअनुसार काम गर्न समय दिन नसक्ने देखिन्छ । तर, अभिनेता अक्षय कुमारले आफ्नी श्रीमती ट्विंकल खन्नालाई अटोमा राखेर घुमाएको तस्विर सार्वजनिक भएपछि सो विचार गलत सावित भएको छ । अक्षयले श्रीमतीलाई आइतबार बिहानै अटोरिक्सामा..
आमिर खानले १००० करोड बजेटको ‘महाभारत’ बनाउंदै, निर्माता मुकेश अम्बानी
शुक्रबार, चैत्र ९, २०७४ साल
एजेन्सी, चैत ८ बलिउडमा ‘मिस्टर परफेक्सनिस्ट’ अभिनेता भनेर चिनिने आमिर खान ‘ठग्स अफ् हिन्दोस्तान’ पछि बलिउड इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो चलचित्रमा अभिनय गर्ने तयारीमा रहेका छन् । फिल्म ट्रेड एनालिस्ट रमेश बालाका अनुसार हिन्दु धर्मको महान ग्रन्थ महाभारतमा आधारित भएर निर्माण हुन लागेको मेगा बजेटको चलचित्र श्रृङ्खलामा आमिर खान मुख्य भूमिकामा देखिने भएका हुन् । यो चलचित्रको निर्माण रिलायन्स कम्पनीका मालिक मुकेश अंबानीले..
‘बूगी वूगी’को नेपाली संस्करण आउँदै, यहि चैत्र १५ बाट प्रशारण हुँने
बिहिवार, चैत्र ८, २०७४ साल
काठमाडौँ , ८ चैत गायन रियालिटी शो ‘नेपाल आइडल’को सफलता पछी अर्को अन्तराष्ट्रिय फ़्रेञ्चाईज डान्स रियालिटी शो ‘बूगी वूगी’ (BOOGIE WOOGIE) यहि चैत्र १५ गते (मार्च २९) बाट प्रशारण हुने भएको छ। सन् १९९६ मा भारतका नावेद जाफरी र रवी भेलले सुरुगरेको यो डान्स रियालिटी शो बूगी वूगीको नेपाली संस्करणमा अभिनेता एबं कुशल नृत्यकार दिलिप रायमाझी, अभिनेत्री प्रियंका कार्की र कोरियोग्राफर..
"द भ्वाइस" फ्रेन्चाइज अब नेपालमा पनि शुरु, ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ असारबाट प्रसारण हुने
काठमाडौँ, ८ चैत : नेपालमा पनि विश्व चर्चित गायन रियालिटी सो ‘द भ्वाइस’को फ्रेन्चाइज आयोजना गरिने भएको छ । ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ असारबाट प्रसारण सुरु हुनेछ । सोको निर्देशन नेपाल आइडलका निर्देशक लक्ष्मण पौडेलले गर्नेछन्। विश्वका १ सय ९१ देशमा प्रसारण हुने द भ्वाइसको फ्रेन्चाइजले गायनमा नयाँ प्रतिभा खोजीमा निकै प्रगति गरेको बताइन्छ । द भ्वाइस अफ नेपाल पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुने..
सावधान! मेकअपको प्रयोग होस् पुराएर मात्र गर्नुहोस्, कतै हानी पो गरिरहेको छ की ?
बुधबार, चैत्र ७, २०७४ साल
काठमाडौँ, ७ चैत हामी राम्रो देखिनका लागि वा आकर्षक बन्नका लागि मेकअप गर्छौ । अनुहारमा मेकअप फाउन्डेसनबाट सुरु गरिन्छ । यो त्यस्तो प्रकारको हुन्छ, जुन अनुहारको रंगसँग घुल्न सक्छ । यो लाएपछि अनुहार अपेक्षा भन्दा बढी नै ग्लोइंग देखिन्छ । यसका साथै यो धेरै समय अनुहारमा टिक्छ । यसले अनुहारमा एउटा तह सिर्जना गर्छ । त्यही मेकअपले हाम्रो प्राकृतिक सौन्दर्य नष्ट गरिरहेको..
रोहित सेट्टीको नयाँ फिल्म ‘सिम्बा’मा सैफ अलीकी छोरी सारा हिरोइन, रणवीर सिंहसँग देखिने पक्का
मंगलवार, चैत्र ६, २०७४ साल
काठमाडौं, ६ चैत । रोहित सेट्टीले निर्माण गर्न लागेको फिल्म ‘सिम्बा’मा सैफ अली खानकी छोरी सारा देखिने भएकी छन् । ‘सिम्बा’मा को अभिनेत्री लिन्छन् ? भन्ने चर्चा भइरहेका बेला सारा अनुबन्धित भएकी हुन् । फिल्ममा उनीसँग रणवीर सिंहसँग देखिने छिन्। धर्मा प्रोडक्सनले आफ्नो अफिसियल ट्टिटरमा फिल्म सिम्बामा सारा रहने कुरा पुष्टि गरेको हो। करण जोहर र रोहिट सेट्टी दुवैले सारालाई फ्रेस..
फिल्म खेल्न छाडेपनि सुनिल सेट्ठीको कमाई डेढ अर्ब ! सेट्ठीले यस्तो काम गर्छन्
आईतवार, चैत्र ४, २०७४ साल
एजेन्सी, ४ चैत बलिउडका एक समयका चर्चित अभिनेता सुनिल सेट्ठीको फ्यान नेपालमा पनि धेरै छन् । तर उनका नयाँ चलचित्र खासै आएका छैनन् । भारतीय चर्चित ५६ वर्षीय अभिनेता सुनिल सेट्ठीले अहिले फिल्म खेल्न भने छाडिसकेका छन् । एक जमानामा अक्षय कुमार, अजय देवगन लगायतका स्टार नयाकहरुलाई समेत टक्कर दिने सेट्ठी आजभोलि खासै पर्दामा देखिँदैन। उनले फिल्ममा काम नगरे पनि वार्षिक डेढ..
पाँच सय पचास जनालाई हराउँदै प्रथम खोटाङ आइडल बने तेजकुमार
खोटाङ, ४ चैत । सोह्र वर्षीय तेजकुमार राई प्रथम खोटाङ आइडल बनेका छन् । गएराति दिक्तेलमा सम्पन्न फाइनल चरणको अडिसनमा आफ्ना चार प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्दै राई प्रथम आइडल बनेका हुन् । आइडल बनेसँगै उनले नगद रु ५४ हजार ५७४ को साथमा मेडल, ट्रफी र प्रमाणपत्र हात परेका छन् । पुरस्कार हात पार्नुका साथै राईलाई छ महिना संगीत विद्यालय अध्ययनको अवसर र एउटा गीत रेकर्डको..
रियालिटी शो का नाममा ठगी गर्ने पक्राउ, ‘डान्स नेपाल डान्स’ टेलिभिजन रियालिटि शो मार्फत ठगि गरेको आरोप
शुक्रबार, चैत्र २, २०७४ साल
काठमाडौँ, २ चैत "डान्स नेपाल डान्स"का आयोजक बिक्रम अछामीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। रियालिटी शो चलाउने भन्दै ठगी गरेको उजुरी परेपछि महानगरिय प्रहरी अपराध महाशाखाको टोलीले अछामीलाई काठमाण्डौको बागबजारबाट पक्राउ गरेको हो । काठमाडौ धुम्बाराहीका अछामीले भि एण्ड भाइरस डान्स एकेडेमी खोली ‘डान्स नेपाल डान्स’ टेलिभिजन रियालिटि शो चलाउँदै आएका थिए। उनले उक्त शोको पहिलो सिजन २०६८ जेठ २७ गतेबाट देशभर अडिशन..
स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि चर्चित गायक उदितनारायण झा अस्पताल भर्ना
बुधबार, फागुन ३०, २०७४ साल
काठमाडौं, ३० फागुन । नेपाली मुलका बलिउडका चर्चित गायक उदितनारायण झाको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना भएका छन् । ६२ वर्षीय गायक झाको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि मुम्बईको एक अस्पतालमा भर्ना भएका हुन् । उदितनारायण मधुमेह र उच्च रक्तचापबाट पीडित हुँदै आएका छन् । भारत सरकारबाट पद्मश्री अवार्ड प्राप्त गायक झाले करि ३० भाषामा १५ हजार गीत गाएका छन् । उदितनारायणको पिसावमा इन्फेक्सन भएको..
‘नेपाल्स मेघा सिनेस्टार’ आयोजना हुने बिजेतालाई एक करोड बराबरको पुरस्कार
मंगलवार, फागुन २९, २०७४ साल
फागुन २९ काठमाडौँ । ओ मेगा इन्टरटेनमेन्टले प्रतिभाशाली कलाकारको छनोट गर्न ‘नेपाल्स मेघा सिनेस्टार’ आयोजना गर्ने भएको छ । आउँदो २८ चैतदेखि यसको अडिसन सुरु हुने आयोजकले जनाएको छ । नेपालमा धेरै प्रतिभावान कलाकार भए पनि उनीहरुले चलचित्रमा आउन अवसर नपाएकालेउनीहरुलाई मञ्च दिलाउन यो प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागिएको निर्देशक प्रवेश सम्राट बरालले बताए । बरालका अनुसार काठमाण्डौ, चितवन, पोखरा, बुटवल, नेपालगन्ज, वीरगञ्ज, इटहरी गरेर नेपालका..
चर्चित बलिउड स्टार इरफान खान क्यान्सर पीडित भएको आशंका, स्वास्थ्यलाभको ओइरो
आईतवार, फागुन २७, २०७४ साल
एजेन्सी फाल्गुन, २७ । चर्चित बलिउड स्टार इरफान खानलाई क्यान्सर भएको आशंका गरिएको छ । इरफानले एक ट्विट गर्दै आफू हाल स्वास्थ्य परीक्षणमा लागेको र दस दिनपछि सबै कुरा बताउने उल्लेख गरेपछिउनको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा इरफान ग्लिब्लास्टोमा मल्टिफर्मबाट पीडित भएको पुष्टि भएको छ । यसलाई चिकित्सा विज्ञानमा क्यान्सर भनेर चिनिन्छ । इरफानले आफू गम्भीर रोगबाट जुधिरहेको उल्लेख गर्दै अहिले सबैको आशीर्वाद..
दीपिका गम्भीर बिरामीको सिकार, डाढमा नशाको समस्या देखियो
शुक्रबार, फागुन २५, २०७४ साल
एजेन्सी, २५ फागुन : बलिउड अभिनेत्री दीपिका पादुकोणका प्रसंसकहरुलाई दुखको खबर छ । उनले आफू पीडाको समस्यामा रहेको बताएकी छन् । आफूलाई डक्टरले करिब चार महिनामा आराम गर्न सल्लाह दिएको पनि अभिनेत्री दीपिकाले उल्लेख गरेकी छिन् । उनको डाढमा नशाको समस्या देखिएको दीपिकाको पारिवारिक स्रोतले बताएका छन् । अप्रिलबाट दीपिकाले विशाल भारद्वाजको फिल्मको छायांकन गर्नुपर्ने थियो । अप्रिलमा आफूले स्वास्थ्य स्थितिका कारण छायांकन..
"मुन्द्रे"ले छोडे जिरे खुर्सानी, मिडिया हबले समयमा पैसा दिन नसकेको गुनासो
बुधबार, फागुन २३, २०७४ साल
फागुन २३ काठमाडौँ । लोकप्रिय हास्यटेलिश्रृंखला जिरे खुर्सानीबाट यसका जितु नेपाल(मुन्द्रे) अलग भएका छन् । उनी यस टेलिश्रृंखलाका निर्देशक, लेखक तथा प्रमुख कलाकारको रुमा थिए। आर्थिक तथा अन्य कारणले काम गर्ने वातावरण नभएपछि छोडेको उनले जानकारी दिए । आफ्नो व्यस्तताबीच समय निकाल्नुपर्ने तर पैसा आउने सुनिश्चितता नहुने भएकाले उनले चाहेर पनि यसलाई निरन्तरता दिन नसकेको बताए । मिडिया हबले समयमा पैसा दिन नसकेर विगतमा..
सांस्कृतिक संग्रहालय नेपाल 'नेपालका विशिष्ट महिलाको फोटो प्रदर्शनी' गर्दै
काठमाडौँ, २३ फागुन । नेपालको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक रुपान्तरणमा विशेष योगदान पुर्याएका महिलाको फोटो प्रदर्शनी हुने भएको छ । सांस्कृतिक संग्रहालय नेपालको आयोजनामा १०८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसर पारेर फागुन २४ देखि ३० गतेसम्म नेपालका विशिष्ट महिलाको ऐतिहासिक फोटो प्रदर्शनी हुने भएको हो । संग्रहालयका अध्यक्ष क्षितिज अरुण श्रेष्ठले ‘नारी शक्तिलाई सम्झौँ, नारीको सम्मान गरौँ’ भन्ने मूलनाराका साथ १०८औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका..
बलिउड निर्देशक सुभाष घई अब नेपाल आउने,चलचित्र निर्माणमा सहकार्य गर्ने सहमति
मंगलवार, फागुन २२, २०७४ साल
फागुन २२ काठमाडौँ । बलिउड निर्देशक सुभाष घई अब नेपाल आउने भएका छन् । भारतमा रहेको कान्तिपुर फिल्म एकेडेमीको टोलीसँग आफू नेपाल आउने प्रतिवद्धता घईले व्यक्त गरेका हुन् । घईको सहयोगीले कुन मितिमा आउने भन्ने समय तोकेपछि ऊनी नेपाल आउने कान्तिपुर एकेडेमीका सीइओ प्रकाश पुरीले जानकारी दिए । टोलीले मुम्बइको चर्चित फिल्म स्कुल विस्लिङ उड इन्टरनेशनलको भ्रमण गरेको थियो । सोहि समयमा त्यहाँका..
पर्साकी सिमरन स्याङ्बोले चुमिन् 'मिस तामाङ २०१८' को ताज
काठमाडौँ, २० फागुन । यस वर्षको मिस तामाङको उपाधि पर्साकी सिमरन स्याङ्बोले जितेकी छिन् । नेपाल तामाङ कला–संस्कृति केन्द्र र एभरेष्ट फेसन होमले संयुक्त रुपमा शनिबार यहाँ आयोजना गरेको एघारौँ संस्करणको मिस तामाङको उपाधि पर्सा ठोरी गाउँपालिका–४ की सिमरनले जितेकी हुन् । उनले प्रतियोगितामा सहभागी २८ प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्दै उपाधि चुमेकी हुन् । सिमरनले प्रतियोगितामा सबैभन्दा बढी भोट प्राप्त गर्नुभएको थियो । उपाधिसँगै उनले..
सलमान आउने कार्यक्रम रद्द नभएको र मिति मात्रै सरेको आयोजकको दाबी
शुक्रबार, फागुन १८, २०७४ साल
काठमाडौं, फागुन १८ । नेपालको राजधानी काठमाडौंमा आयोजना हुन लागेको सलमान खानको कार्यक्रम रद्द भएको नभई त्यसको मिति मात्रै पर सरेको आयोजकले दाबी गरेको छ । कैयौं सञ्चारमाध्यममा कार्यक्रमका लागि सलमान खान नेपाल आउन लागेको तर सुरक्षा कारणले रद्द भएको भन्ने खालका समाचार बाहिर आउन शुरु गरे लगत्तै आयोजक ओडीसी इन्टरटेन्मेटले त्यसको खण्डन गरेको हो । ओडीसी इन्टरटेन्मेन्टका प्रबन्ध निर्देशक सिमान्त गुरुङले..
किन डराए सलमान खान विप्लबसंग ? सलमानको टुँडिखेलमा हुने कार्यक्रम विप्लबका कारण स्थगित
काठमाडौँ, १८ फागुन । बलिउडका लोकप्रिय अभिनेता सलमान खान नेपाल आउने कार्यक्रम स्थगित भएको छ । सलमानको ‘दबंग द टुर’ अन्तर्गत उक्त कार्यक्रम १० मार्चमा काठमाडौंमा हुने यसअघि नै तय भएको थियो। विप्लव समूहको चेतावनी दिएसंगै सलमानले नेपाल नआउने सन्देश आएको थियो । कार्यक्रम आयोजक ओडीसी इन्टरनेसनलले ‘दबंग द टुर’ रद्द भएको समाचार नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ । आफू सहभागी हुने कार्यक्रका..
२ दशकपछि गायक उदितनारायण आफ्नो जन्मस्थल सप्तरी आइपुगे, जेठी पत्नी रञ्जना पनि सँगै
बिहिवार, फागुन १७, २०७४ साल
राजविराज, १७ फागुन : झण्डै दुई दशकपछि चर्चित गायक उदितनारायण झा बुधबार आफ्नो जन्मस्थल सप्तरीको भारदह आइपुगेका छन् । गायक झा जेठी पत्नी रञ्जनासहित हनुमाननगर कंकालनी नगरपालिका–१ भारदहस्थित आफ्नो घरमा बुधबार आएको स्थानीयवासी आकाशराज भण्डारीले जानकारी दिए । गायन पेशामा लागेर लामो समयदेखि भारतको मुम्बईमा बसोबास गर्दै आएपनि उनका दाजुभाइ भने भारदहस्थित घरमै बस्दै आएका थिए । स्थानिय पत्रकारसँग भारदहमा छोटो कुराकानी गर्दै..
Results 914: You are at page 26 of 31